Beesha Sheekhaal oo Madaxweynihii 6-aad kaga dhawaaqday Magaalada Kismaayo |
Beesha Sheekhaal oo Madaxweynihii 6-aad kaga dhawaaqday Magaalada Kismaayo
Iyadoo maalmihii ugu danbeeyay Magaalada Kismaayo looga dhawaaqayay Madaxwaynayaal farabadan oo mid walba sheeganayo inuu yahay Madaxwaynaha rasmiga ah ee Jubbaland ayaa hadana waxaa maanta Kismaayo looga dhawaaqay madaxwayne kale oo horleh.
Gaashaanle Xasan Xaaji Maxamed ayaa sheegay in ay Beeshiisu u dooratay Madaxwaynaha Jubbaland isla markaana kulan balaaran oo maanta ka dhacay degmada Kismayo loogu doortay Madaxwaynaha Maamul goboleedka Jubbaland.
Wuxuu sheegay goobta doorashadiisu ay ka dhacday inay ku sugnaayeen dhamaan salaadiinta beesha iyo qaar kamid ah odayaal dhaqameed kasoo jeeda beelaha daga deeganadaasi, wuxuna xusay in uu yahay Madaxwaynaha rasmiga ah ee Jubbaland.
C/rixmaan Santuur iyo Nabadoon C/laahi Waamo oo kamid ahaa ragii dhawaan lagu xayiray garoonka Kismaayo ayuu sheegay Xasan Xaaji inay kaalin wayn ka qaateen caleema saarkiisa isla markaana ay yihiin salaadiintaasi sida uu sheegay kuwa asalka ah ee Jubbaland.
Wuxuu tibaaxay inuu ku rajo wayn yahay sidii la iskugu keeni lahaa dhamaan inta sheegatay Madaxwaynaha Maamul goboleedka Jubbaland si meel dhexe wax la iskugu keeno